Al-Shabaab Oo War kasoo Saartay Qaraxii Caawa ka Dhacay Muqdisho, Iyo Khasaaraha ka Dhashay. -
Al-shabaab ayaa war soo saartay Qarax caawa ka dhacay magaalada Muqdisho oo lala beegsaday xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa lala eegtay gaadiid uu la socday Xildhibaan C/qaadir Carabow oo ka mida Baarlamaanka dowladda,.
Al-shabaab waxay sheegtay in qaraxu haleelay Gaari Cabdi Bile ah oo ay saarnaayeen ciidamadii ilaalada u ahaa Xildhibaanka oo ay sheegeen iney khasaare xoogan u geysteen.
“Mujaahidiinta ayaa caawa qarax ku beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaadka ilaalada u ahaa Xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya, qaraxa oo laga fuliyey wadada Makka Al Mukarrama waxaa ku dhintay saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada xildhibaanka oo fara cidiyo kaga badbaaday weerarka” ayaa lagu sheegay warka kasoo baxay Al-shabaab oo aan lagu cadeynin sida ay qaraxaan u fuliyeen iyo waxyaabaha loo adeegsaday.
Qaraxan ayaa laga maqlay xaafadaha Muqdisho, waxaana xildhibaanka la beegsaday uu saarnaa gaari nooca aan xabaddu karin ah, iyadoo qasaare xoog leh uu soo gaaray ilaaladiisa iyo gaarigii ay wateen ugu yaraan todoba qof ayaa ku dhintay weerarkan halka tobaneeyo kale la dhigay isbitaalada.
Weerarkan oo ka dhacay isgoyska Xaaji Baasto oo ku yaalla wadada mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama ayaanay illaa hadda wax war ka soo saarin laamaha amaanka dowlada Somalia.